Antony iray hafa mahafinaritra hitsidihana an'i Trinidad sy Tobago: Hashing!
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Antony iray hafa mahafinaritra hitsidihana an'i Trinidad sy Tobago: Hashing!
Ny World Inter Hash 2020 dia nampiana antony mahafinaritra iray hafa hitetezana an'i Trinidad sy Tobago. Ireo nosy dia efa fantatra fa fitsangatsanganana maro loko sy mahafinaritra kokoa ary fitsangatsanganana. Ilay karnaval malaza eran-tany no eritreretin'ny tsirairay, fa ankehitriny World Inter Hash 2020 hanampy antony hafa hamandrihana fialan-tsasatra any Trinidad sy Tobago.
Any amin'ny tendrony atsimo indrindra amin'ny faritry ny Nosy Karaiba ary 11 kilaometatra miala an'i Venezoela, i Trinidad sy Tobago dia heverina ho vavahady mankany Amerika. Trano misy olona 1.3 tapitrisa isan-karazany ara-kolotsaina, i Trinidad sy Tobago no vilany mandevona ao amin'ilay faritra. Ireto nosy mando sy mando ala ireto dia mirehareha amin'ny renirano maro mamakivaky ny tany, voahodidin'ny morontsiraka mahafinaritra sy mafana.
Hetsika mahafinaritra tsy fifaninanana i Hashing ary mitaky mpihazakazaka mamakivaky tanety isan-karazany — ao anatin'izany ny morontsiraka, havoana, lohasaha, renirano, faritra ala, tanàna ary distrika ambanivohitra miaraka amin'ny namana izay ahafahan'izy ireo mijery ireo zava-boahary, zavamaniry ary zavamaniry eny an-dalana. .
Ny fisotroana labiera dia iray amin'ireo valisoa azon'ny "hashers" raha ny filazan'ny tranonkala World Inter Hash.
Mpihazakazaka iraisam-pirenena an'arivony maro no antenaina hitsidika an'i Trinidad sy Tobago amin'ny taona ho avy handray anjara amin'ny fampiantranoana voalohany ny firenena World Inter Hash 2020 nanomboka ny 23-26 aprily.
World Interhash 2020 Trinidad sy Tobago
Ny minisitry ny fizahantany, Andriamatoa Randall Mitchell dia nilaza fa: “Betsaka ny tombony ara-toekarena azo avy amin'ny fampiantranoana ny Inter Hash 2020 eto amin'ity firenena ity, satria ny mpandraharaha mpizahatany, ny hotely, ny mpandraharaha AIRBNB, ny mpamily fiarakaretsaka ary ireo mpiara-miasa hafa dia antenaina handray soa avokoa. "
Minster Mitchell dia nilaza fa ity hetsika ity dia antenaina ihany koa hampisondrotra ny fahatongavan'ny mpitsidika eto amintsika satria olona an'arivony no nisoratra anarana fa handray anjara amin'ny fanatanjahantena sy hetsika hafa amin'ny nosy roa.
Hoy izy: "Antenaina hampiasa vola amin'ny fanatanjahantena ary na dia ny fizahan-tany fizahan-tany aza ity hetsika ity."
Hashers, izay eo anelanelan'ny 45 ka hatramin'ny 80 taona, dia hamakivaky vondrom-piarahamonina marobe, toa an'i Maracas, Arima, Gran Couva ary Chaguarama- izay toerana maha-J'ouvert Run azy ireo izay hanisy ny tolotra vokatra fizahan-tany ara-kolontsaina. ”
2000 mahery ireo hasera avy amin'ny firenena 75 mahery no efa nisoratra anarana handray anjara.
Vaovao misimisy momba an'i Trinidad sy Tobago kitiho eto
Spirit Airlines hividy fiaramanidina Airbus A100neo Family hatramin'ny 320
Mijanona ho tsy mihetsika ny governemanta Afrikanina Tatsimo satria mitobaka hatrany ny isan'ny fizahan-tany